အစိုးရ စီမံကိန်းများကို ဦးစီးဌာနတစ်ခု သီးခြားပြန်လည် ဖွဲ့စည်းပြီး ဆန်းစစ်၊ စောင့်ကြည့်၊ ?? - Yangon Media Group
ဦးစီးဌာန တစ်ခုသီးခြားပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြီး အစိုးရစီမံကိန်းများဆန်းစစ်ခြင်း၊စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ အစီရင်ခံခြင်းများဆောင်ရွက်နေဟု စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန် ကြီး ဦးမောင်မောင်ဝင်းကပြောသည်။ မေ ၃၁ ရက်နေ့၊ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတထံမှ ပေးပို့ထား သော ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်ဧပြီမှ စက်တင်ဘာအထိ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအပ် ငွေစာရင်း၏ လိုငွေအားဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ ကျပ် ၆၄၁ ဒသမ ဝ၂၉ ဘီ လီယံချေးယူရေးကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုအ ဆင့်အဖွဲ့အစည်းဝင်များက ပြန်လည်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးရာ ယင်းသို့ ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အစိုးရစီမံကိန်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူကိုတိုက်ရိုက်အ ကျိုးရှိစေမည့်စီမံကိန်းများဆောင်ရွက်ရန်၊ အကျိုးမရှိသောစီမံကိန်း များကိုရပ်ဆိုင်းရန်နှင့် စီမံကိန်းများ အမှန်တစ်ကယ်ထိရောက်မှု ရှိ၊ မရှိ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန်တို့ကို ကိုယ်စားလှယ်များက ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ယင်းအပေါ်စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဝင်းက”စီမံကိန်း စိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံ ရေးဦးစီးဌာနကိုလည်း သီးခြားပြန်လည်ဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့ စီမံကိန်းများကို ဆန်းစစ်ခြင်း၊ အကောင်အ ထည်ဖော်မှုကို စောင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ တိုးတက်မှုကို အစီရင်ခံခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်”ဟု ဆိုသည်။ယခုအခါ အသုံးစရိတ်များ ကိုခွဲဝေရာ၌ ကာလလတ်ဘဏ္ဍာ ရေးမူဝါဒကို ဦးစွာခန့်မှန်းရေးဆွဲ ပြီးမှ ယင်းသတ်မှတ်ချက်ဘောင်အတွင်းက တောင်းခံစေခြင်းဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
အခွန်ငွေများပြည့်ဝစွာ ကောက်ခံရရှိရန် အတွက်အခွန်ဆိုင်ရာ စ နစ်များပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း၊ အခွန်ထမ်းများကိုယ်တိုင် အခွန်စည်း ကြပ်မှုခံယူခြင်း၊ အခွန်ဆိုင်ရာ ဥပ ဒေများကိုခေတ်စနစ်နှင့်အညီ ပြင် ဆင်ပြဋ္ဌာန်းခြင်းတို့ ဆောင်ရွက် ထားကြောင်းလည်း ဒုတိယဝန်ကြီးက ပြောသည်။ အစိုးရအနေဖြင့် လိုငွေကို ဗဟိုဘဏ်မှချေးယူခြင်းအား လျှော့ချရန်ဆွေးနွေးမှုများနှင့်ပတ်သက် ပြီးလည်း ဒုတိယဝန်ကြီးကချေးယူ မှုကို လျှော့ချနိုင်ဖို့အတွက် အစိုးရငွေတိုက်စာချုပ်၊ ငွေတိုက်လက်မှတ်များကို ပိုမိုတိုးမြှင့်ရောင်းချခြင်း ကို ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ပြောသည်။
”အဓိကရည်မှန်းထားတာက တော့ပြည်ထောင်စုအစိုးရကပြည် တွင်းမှငွေချေးယူတဲ့အပိုင်းကို တတ်နိုင်သမျှထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်သွားဖို့နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ထံက ချေးယူမှုကိုလည်း တဖြည်း ဖြည်းလျှော့ချသွားဖို့ ရည်မှန်းထားပါတယ်”ဟု ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမောင် မောင်ဝင်းကဆိုသည်။ ယင်းသို့ ရှင်းလင်းမှုများပြီး နောက်အစိုးရအပ်ငွေစာရင်းလိုငွေ အားဖြည့်ဆည်းရန် ဗဟိုဘဏ်မှ ကျပ် ၆၄၁ ဒသမ ဝ၂၉ ဘီလီယံ ချေးယူမည့်ကိစ္စကို လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ရယူခဲ့ရာ ထောက်ခံ မဲများသဖြင့် အတည်ပြုကြောင်း လွှတ်တော်နာယကကကြေညာခဲ့သည်။
ပြည်တွင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းပေါင်း ၄၆ဝဝ ကျော် ဖန်တီးပေးမည့် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှု??